Koeman oo ka hadlay guushii ay Barcelona ka gaartay kooxda Getafe… (Muxuuse ka yiri mustaqbalka Lionel Messi?) – Gool FM
(Barcelona) 23 Abriil 2021. Tababaraha kooxda Barcelona ee Ronald Koeman ayaa qabtay shir jaraa’id oo uu kaga hadlay guushii weyneyd ee Blaugrana ka gaartay naadiga Getafe, isagoo dhinaca kale ka hadlay mustaqbalka Lionel Messi.
Barcelona ayaa garoonkeeda Camp Nou saddexda dhibcood kaga qaadatay kooxda Getafe, kaddib markii ay kaga adkaatay 5-2, kulan qeyb ka ahaa horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Kaddib ciyaarta Ronald Koeman ayaa qabtay shir jaraa’id wuxuuna ka hadlay dareenkiisa kaddib guusha ay ka gaareen kooxda Getafe, wuxuuna yiri:
“Waa natiijo fiican, waxaan si fiican u ciyaarnay qeybtii hore, laakiin qeybtii labaad waxaan la soo baxnay diirad yari, xawaaraha ayaan gaabinay, waxaana u qasnay ciyaarta si aan loo baahnayn, markii ay taasi dhacdana, Ciyaarta ayaa nagu adkaatay, taasi waa taas waana inaan wax ka barano.”
“Ciyaarta kahor waxaan ogeeyn inay wali na hor taalo 8 kulan oo u dhiganta sida final oo kale, marka waxay aheyd inaan diirada saarno oo aan ka faa’iideysano qaladaadkeenii hore.”
“Waxaa jiray waqtiyo difaac oo aysan Mingueza iyo Araújo midkoodna si fiican u shaqeyneynin, marka ciyaartoyda da’da yar ee Barca waa inay bartaan inay noqdaan kuwa heer sarre ah kulamada oo dhan.”
Intaas kaddib Ronald Koeman ayaa ka hadlay mustaqbalka Lionel Messi ee kooxda Barcelona, wuxuuna yiri:
“Mustaqbalka Messi wuxuu ku jiraa gacmihiisa, waa ciyaaryahan weyn oo aan waligiis hoos u dhigin heerkiisa, wuxuu ku jiraa qaab ciyaareed isku mid ah intii uu ku guda jiray xirfadiisa waana sababta uu u yahay kan ugu fiican, waxaan rajeyneynaa inuu nala joogi doono mudo dheer.”